သူတို့အမြင် Buddhism | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » သူတို့အမြင် Buddhism
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 23, 2016 in Opinions & Discussion, Science & Religion | 13 comments
တနေ့က စီအန်အန်သတင်း တက်ဖတ်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ တွေ့တာနဲ့ ပေးထားတဲပစ့လင့်ခ် ဝင်ဖတ်ပါတယ်။ ဗုဒ်ဓဘာသာအပေါ် ခေတ်အမြင် သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပုံပါ။ ကိုဘေးနွားကင်သခင် မာမုခိုင်မ် အမျိုးဖြစ်ပုံရတယ်။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ဘာသာပျံ မှီငြမ်း တင်လိုက်ပါတယ်။ မူရင်းအာဘော် မပေါက်ရင် အနေထိုင်မတတ် ဘဂျီးနွားကျောင်းသူ ကြောင့်အပြစ်သာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။ ဝန်ခံပါတယ် င်္အဂုလိစာ စနစ်တကျလေ့လာမှု မရှိခဲ့ပါ။ အားထုတ်မှု ပိုဝေးပါတယ်။ အတိအကျမဟုတ်တောင် အရိပ်အယောင်မျှ ရလိမ့်မည် ယူဆလျက် ပို့စ်တင်ပါသည်။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဦးနှောက်မုန်တိုင်း brain storm လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်၊ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ စိတ်အခါ Open Minded ထားဖတ်ကြပါ။ ကြိုက်တာရှိသလို မကြိုက်တာလဲ တွေ့ပါမည်။ ကျနော် သဘောမတူတဲ့ အချက်ကတော့ လက်တွေ့သိပ်ဆန်လွန်ခြင်းပါ၊ အဲတာလွန်တော့ ရုပ်ဝါဒီဖက် ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ သီလ သမာဓိ ပညာ စုံမှ သိနိုင်ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သမာဓိနယ် မရောက်ဘဲနဲ့ ကိုယ်မြင်တာ သိတာ ပိုင်းဖြတ်ဝေဖန် ဆင်ခြင်မှုဟာ မလုံလောက်ပါဘူး။ မှားသလားဆိုတော့ မှားတယ် မဆိုနိုင်တဲ့ တပိုင်းတစ အမှန်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သဘာဝလွန် ကိစ်စတွေမှာ စိတ်ပိုင်းစွမ်းအင် နားမလည်ဘဲ နားလည်အောင်လည်း မလုပ်ခြင်ဘဲ မရှိဘူး မဟုတ်ဘူး ဆိုသူများနှင့် ငြင်းရန် အလွန်ခက်ပါတယ်။ ခက်တာက အဲဒီအရာတွေသည် အမှန်သစ်စာ တရားဓမ မထိုက်လေတော့ အငြင်းပွားလည်း လိုရင်းမရောက် ပိုဝေးဖို့သာ ရှိပါမည်၊ ဥပမာအားဖြင့် ရေကို ရွှေခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ငွေခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရိုးရိုးခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ မည်သို့ ခပ်သောက်သောက် ရေငတ်ပြေခြင်းကို ရွှေခွက်တော့ မရှိ၊ ငွေခွက်တော့မရှိ သံသယပွား ပြစ်မှားမိခြင်း သတိပြုရန်လိုသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော အရာတခုကို ဒါဖြင့် ဟိုဟာဖြင့် ကန့်သတ်ဘောင်ခတ်မှုသည် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက် ခြေတလှမ်းလျင် စတြာဝဠာတတိုက် ရောက်သော ဈာန်ပျံရသေ့ လောကအဆုံးရှာရန် စတြာဝဠာအပြင်ထွက် ခရီးနှင်ခြင်းနှင့် အလားတူသည်ဟု ကောက်ချက်ချခြင်ပါသည်။
ပုံ တြားဓံမကို ယုန်ကြည်သက်ဝံသူ သူတော်ကောင်းကြောင်ကြီး
10 Interesting Facts About The Buddha
သူ့ရာဇဝင်က အံ့သြမကုန်နိုင်ဖွယ်ရာပါပဲ။ ဟိမဝဏ်တာတောင်ခြေရှိ ဘုရင့်နိုင်ငံလေးရဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား ဖြစ်သူ သိဒတ်ထဂေါတမဟာ လောကီစည်းစိမ် စံစားဖို့ မွေးဖွားလာခဲ့သူပါ။ သူအို၊သူနာ၊သူသေ အစရှိတဲ့ လူ့ဘဝဆင်းရဲခြင်းဒုတ်ခကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့ရမှုက သူ့ကို သတိသံဝေဂ ရစေတယ်။ အမှန်တရားအဖြေ ရှာဖို့ မိသားစုကို စွန့်ခွာပြီး ခြေသလုံးအိမ်တိုင် လှည့်လည်သွားလာခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီးနောက် သပ်ဗညုတရွှေညဏ်တော်ရကာ ဗုဒ်ဓဘုရား အဖြစ်ရောက်ရှိပြီး ဘာသာရေးအသိအမြင် အသစ်တရပ် ဖေါ်ထုတ်ညွှန်ပြခဲ့တယ်။ ယခုတင်ပြချက်များဟာ ဗုဒ်ဓဖြစ်စဉ်ကို ကျော်လွန်ပြီး သမိုင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်၁၀ချက် ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအချက်သည် ဗုဒ်ဓနဲ့ပတ်သက်လို့ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စရာ၊ လူအများ နားမလည်နိုင်စရာ အကောင်းဆုံး အငြင်းပွားဖွယ်ရာပါ။ ဗုဒ်ဓမူလပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်တုံးကမှ ဘာသာရေးတရပ် တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ မကြွေးကြော်ခဲ့ပါ။ ဗုဒ်ဓဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဘာသာရေးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် ဘာသာရေးအသစ် တည်ထောင်ထားရစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်လောက်ဖွယ် သမိုင်းအချက်အလက် တကြောင်းတလေမျှ မတွေ့ရဘူး။ သူ့ကိုယ်သူ ရှေးရိုးစဉ်လာ ဟိန်ဒူဘာသာရေး သွန်သင်ဆုံးမချက်ကို ဆန့်ကျင်သူ နဲ့ အခြားနည်းလမ်းတခုကို လမ်းညွှန်ပြသူလို့ သမုတ်တာ ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။ ဘာသာရေးအသစ် တခုကို ဦးဆောင်ခြင်းထက် အဲဒီခေတ်အခါက အိန်ဒိယမှာရှိတဲ့ အိမ်ယာထူထောင် ပစ်စည်းဥစ်စာ တွယ်တာမှုမဲ့ ကျင့်စဉ်အားထုတ်သူ အုပ်စုများထဲက တခုကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့တယ်။ သူပျံလွန်တော်မူပြီးမှ တည်ထောင်ထားတဲ့ အသိုင်းအဝန်းက ဘာသာရေး ဂိုဏ်းဂဏ အဖြစ်သို့ တဖြည်းဖြည်းခြင်း ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ရာဇဝင်တွေမှာ ဗုဒ်ဓကို သုဒေါဒနဘုရင်ကြီးရဲ့ သားတော်မင်းသားလို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ မင်းသားတပါး ဆိုတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက် အခြေခံမရှိတာမို့ သူ့ဖခမည်းတော်ဟာ ပဒေသရာဇ်ဘုရင် ဟုတ်ခြင်မှတောင် ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင် သု့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ နယ်မြေအကြီးအကဲ အဖြစ်သာ ယုံကြည်ရပါတယ်။ ဗုဒ်ဓခေတ်ကာလ လူနေမှုစနစ်သည် ပဒေသရာဇ် ဘုရင်စနစ်မဟုတ်ဘဲ သမတနိုင်ငံစနစ် ဖြစ်ပါသည်။ သြဇာတိကမရှိ မိသားစု အကြီးအကဲများ ပုံမှန်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး အုပ်ချုပ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ်ဓရဲ့ မိသားစုဟာ အဲလို နိုင်ငံရေးစနစ်မှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခေါင်းဆောင် မိသားစုများထဲမှ တခုပါ။
၈ ငြင်းခုံစရာ ကြီးပြင်းရာ
ဗုဓဝင်ကျမ်းအရ Kapilavastu မြို့သည် ဗုဒ်ဓအလောင်း အသက်၂၉နှစ်အထိ နေခဲ့ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါတော့ အဲဒီနေရာကို Tilaurakot ခေါ်ပြီး အိန်ဒိယ-နီပေါ နယ်စပ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ နီပေါနိုင်ငံတောင်ပိုင်း Terai ဒေသမှာ တည်ရှိတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များ လေ့လာတော့ တူးဖေါ်ရရှိတဲ့ ပစ်စည်းပစ်စယများဟာ ဗုဒ်ဓအလောင်းလျာ ခေတ်ကာလ မဟုတ်တာ တွေ့ရတယ်။ Kapilavastu မြို့ကို ဗုဒ်ဓ မဖွားခင် နှစ်တရာ သို့မဟုတ် ပိုကြာတဲ့ကာလက တည်ထောင်ခဲ့တာလို့ ယူဆရပေမဲ့ အဲလောက် ရှေးကျတဲ့ အရာတခုမှ မတွေ့ရ။ ဒီတော့ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်လာပြီး အခြားတွေးဆချက် တခုတင်ပြလာပါတယ်။ Kapilavastuမြို့သည် တကယ်တော့ အိန်ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာသာရှိပြီး ဗုဒ်ဓ ဇာတိမြို့ဟာ Piprahwa အမည်ရှိ ရွာမတိုင်ခင် ကနဦးနေရာဖြစ်မယ် ဆိုတာပါပဲ။ အတိအကျနေရာဟာ မျှော်မှန်းဆချက်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး ငြင်းခုံကြဆဲပါ။ ပိုရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့အချက်က အေဒီ လေးရာစုနဲ့ ခုနှစ်ရာစု အတွင်း မစ်ဇိမဒေသကို ဘုရားဖူးရောက်တဲ့ တရုတ်ဘုန်းကြီး Faxian and Xuanzang တို့ရဲ့ ရှေးဟောင်းမှတ်တမ်း မှတ်ရာများပါပဲ။ Kapilavastu သည် ဗုဒ်ဓဖွားမြင်ရာ လုမ်ဘဏီဥယျာဉ်ရဲ့ အနောက်ဖက် မည်မျှကွာဝေးသလဲ မှတ်၂ခုစလုံးနဲ့ ကွဲလွဲပါတယ်။
၇ ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်း မသေချာ
ရှေးအစဉ်လာ ယုံကြည်မှုမှာ ဗုဒ်ဓအလောင်းလျာကို ဘီစီ၅၆၀ ဝန်းကျင် ဖွားမြင်သည်။ ထိုနှစ်အပိုင်းခြားသည် အိန်ဒိယ မှတ်တမ်း အစီအစဉ် အခြေခံတာဖြစ်ပြီး ဘီစီ ၂၆၈ ကနေ ဘီစီ ၂၃၂ အထိ အုပ်စိုးသွားတဲ့ အိန်ဒိယနိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံး အသောက မင်းကြီးခေတ် မှတ်တမ်းတင် တွေ့ရှိချက်များနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှု မရှိတာကြောင့် ခေတ်သစ်ပညာရှင်များ လက်မခံကြပါ။ အသောကခေတ်ကာလ အတိအကျကို ပညာရှင်များ သိလာတဲ့အခါ အိန်ဒိယခေတ်ဟောင်း မှတ်တမ်းကာလသည် မှားယွင်းတွက်ချက်မှုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ဗုဒ်ဓ ပျံလွန်တော် မူတာ အသောကခေတ် မတိုင်ခင် နှစ်တရာလောက်က ဆိုတဲ့ အစောပိုင်း ဗုဒ်ဓကျမ်းစာများကို ပညာရှင်အများစု ကိုးကားလက်ခံကြတယ်။ အားလုံးသဘောတူတာက သက်တော်ရှစ်ဆယ် ပရိနိဗာန်ပြု တော့ ဖွားတော်မူချိန်သည် ဘီစီ ၄၅၀ ဝန်းကျင်ခန့်လောက်။ ခိုင်လုံတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက် အရင်းခံမှာ အစောပိုင်း ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်များဟာ ဗုဒ်ဓခေတ်ကာလ အချိန်မှတ်တမ်းများကို နောက်တိုးရွှေ့ဖို့ လိုလားဟန်ရှိတယ်။ ရှေးကြလေ အခြားပြိုင်ဖက် အယူဝါဒတွေထက် ကိုယ့်အယူ ပိုင်စိုးမှုကို ပိုယုံကြည်ဖွယ်ဖြစ်လေမို့ ဟိုးအရင်ထဲက ဒါတွေ ရှိလာတာ လုပ်ကြပုံပါ။ အစောပိုင်း ဗုဒ်ဓဘာသာ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုများနဲ့ ဆန့်ကျင်လို့ နောက်ပိုကျတဲ့ အချိန်မှတ်တမ်းများ သမိုင်းအမြင်အရ ခိုင်လုံတိကျပါတယ်။
၆ ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံ
သမိုက်အချက်အလက်နဲ့ တူးဖေါ်တွေ့ရှိရတက် အထောက်အထားများအရ ပြောနိုင်တာ ဗုဒ်ဓဘာသာဟာ အစောပိုင်းမှာ အရေအတွက်အားဖြင့် ယုံကြည်သက်ဝင်သူ သိပ်များများ မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဗုဒ်ဓ ပျံလွန်ပြီးနောက်ပိုင်းထိ သေးငယ်တဲ့ သာမန် အုပ်စုဖွဲ့ ကျင့်စဉ်အဖြစ် တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလ အထောက်အထားများအရ အစပိုင်း သာမန် ရိုးရိုးလေးပါ။ ဘီစီသုံးရာစုမှာတော့ လုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အသောကဘုရင်က ဗုဒ်ဓဘာသာကို အိန်ဒိယရဲ့ နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်လိုက်ပါပြီ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးလောကကိုလည်း ဗုဒ်ဓအဆုံးအမ ခံယူဖို့၊ သာသနာပြုဖို့၊ ဘုန်းတော်ကြီးများကို နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရာများမှာ ပါဝင်ပက်သက်မှုရှိဖို့ အားပေးအားမြှောက် ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ်ဓ ပျံလွန်ချိန်နဲ့ အသောကခေတ်ကာလမှာ ဗုဒ်ဓယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ လွန်စာရှားပါး တွေ့ရခဲပြီး အသောကခေတ်အလွန်မှာတော့ အမြောက်အများ ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
၅ ဖန်ဆင်းအကြံ ဒို့လက်မခံ
ဘာသာတရား အမြောက်အများမှာ မူလတည်ထောင်သူများဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား၊ ဘုရားသခင် အစေအပါး အနွယ်ဝင်၊ တမန်တော်စသဖြင့် ကြွေးကြော်ခံယူကြတယ်။ ဗုဒ်ဓသည် ဖန်ဆင်းရှင်လို့ ဘယ်တုံးကမှ မပြောခဲ့ဘူး။ ဘယ်တုံးကမှ တမန်တော်သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းရှင် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် မခံယူခဲ့ဘူး။ လူသားတဦးအဖြစ်နဲ့ လူသာမန်ထက် ပိုမြင့်မြတ်သော မဟာလူသားအဖြစ်သာ ယုံကြည်သက်ဝင်စေခဲ့တယ်။ ပူဇော်သက်ကာရ ပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲ အသိညဏ်ပညာနဲ့ လုံလစိုက်ထုတ်မှုကသာ လွတ်မြောက်ခြင်း အမှန်လို့ ဟစ်ကြွေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဘယ်လို လူလူခြင်း တူညီခြင်း လူသားဆန်မှုကို နှိုးစော်ခဲ့ပေမဲ့ အနန်တတန်ခိုးတော်ရှင် လူသားမဆန်တဲ့ ဘုရားအဖြစ်နဲ့ ဘာသာတရား ထွန်းကားလာသည်။
ဗုဒ်ဓကို လုံးဝသက်သတ်လွတ်သမားအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ပုံဖေါ်မှုများ ရှိတယ်။ သမိုင်းအချက်အလက် အတည်ပြုစရာ မတွေ့ပါ။ အစောပိုင်း ဗုဒ်ဓကျမ်းစာများမှာတောင် ဗုဒ်ဓကို သက်သတ်လွတ်စားသူအဖြစ် မဖေါ်ပြထားဘူး။ ဒါ့အပြင် ဗုဒ်ဓ အသားစားကြောင်း၊ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါ အသားပြုတ်ရည် အဟာရအဖြစ် မှီဝဲဖို့ တိုက်တွန်းချ က်များကိုပင် ရေးသားထားသည်။ ဗုဒ်ဓ ပျံလွန်တော်မမူခင် နောက်ဆုံးဘုမ်းပေးသော အစာမှာ တောဝက်သားဟု ကျမ်းဂန်အချို့တွင် ဖေါ်ပြပါတယ်။ အစောပိုင်း ဗုဒ်ဓဘာသာ ယုံကြည်သက်ဝင်သူများမှာလည်း တင်းပြည့်ကြတ်ပြည့် သက်သတ်လွတ်ဝါဒီများ မဟုတ်ကြပါ။ ဗုဒ်ဓပျံတော်မူပြီး နှစ်ပေါင်းကြာပြီးနောက် ကျင့်စဉ်များတွင် သက်သတ်လွတ်အယူဝါဒ ပူးတွဲထည့်သွင်းလာတော့တယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ဗုဒ်ဓဘာသာဟာ အစောပိုင်း နေ့ရက်များမှာ သူ့ထက်ပို ဝါရင့်ပြီး ငါတို့က မူလအစလို့ ကြွေးကြော်စည်းရုံးတဲ့ အြားသော အယူများနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲတော့ သူတို့လိုပဲ ကိုယ်လည်း ဘုရားလောင်းဇာတ်ထုပ် ခင်းရတာပေါ့။ ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ်ဓ သွန်သင်ချက်များ မနေ့တနေ့ကမှ ပေါ်လာတာမဟုတ်၊ အချိန်ကာလ ကန့်သတ်မဲ အမြဲမှန်တဲ့တရားလို့ ဆိုခြင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာ အဲဒီဇာတ်တော် အတော်များများမှာ အခြေခံအချက်များ ထပ်တူနေခြင်းပါ။ မိခင်ဝမ်းထဲမှာ ဘုရားလောင်းခလေး ခြေတင်ပလင်ချိတ်ထိုင်တယ်၊ ဖွားပြီးပြီးခြင် မြောက်အရပ် မျက်နှာမူလျက် ခြေခုနှစ်လှမ်း လှမ်းတယ်။ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေနဲ့ အလှူခံပုဂ်ဂိုလ် မြင်ပြီးနောက် တောထွက်တယ်။ မြက်ဖျာ ပေါ်ထိုင်ရင်း ဘုရားညဏ်ရတယ်။ သွန်သင်ဆုံးမချက်များ မပြီးဆုံးမှီ ဘယ်တော့မှ ပရိနိဗာန်မပြု။ နောက်ဆုံးမှာ အသားဟင်း ဆွမ်းဘုမ်းပေးပြီး ပျံလွန်တယ်။
၂ နတ်ဘုရား မှတ်မှား
လူသားဝါဒနဲ့ လူသားအဖြစ်သာ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့သူ တဦးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ သဘာဝလွန် နတ်ဘုရားသဖွယ် သတ်မှတ်ပူဇော်နေကြတာ တကယ်ပဲ သရော်စရာ ကို့ယို့ကားယားနိုင်လှပါတယ်။ အမြဲတမ်း တိုးပွားနေသော နတ်ဘုရားများရှိတာ ဟိန်ဒူဝါဒမှာလည်း ဗုဒ်ဓကို နတ်ဘုရားတဆူလို့ Vishnu ဘုရားရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန် တမျိုးအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ ပိုရယ်စရာကောင်းတာ ဗုဒ်ဓကို လူအဖြစ်ထက်ပို မြှင့်တင်လိုက်လို့ ပိုပြီး တန်ခိုးရှိ မြင့်မြတ်မလာခြင်းပါ၊ မရေမတွက်နိုင်သော နတ်ဘုရားများ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဟိန်ဒူဘာသာလိုမျိုးမှာ လူကနေ နတ်ဘုရားအဖြစ် ပြောင်းလိုက်လဲ ထောင်သောင်းချီတဲ့ နတ်ဘုရားတွေထဲက သာမန်နတ်ဘုရားတပါးသာ ဖြစ်လာလို့ပါပဲ။
၁ ဓါတ်တော်မွေတော်
မဟာပရိနိဗာန်သုတာန်မှာ ဖေါ်ပြတာ ဗုဒ်ဓ ပျံလွန်တဲ့အခါ ရုပ်ကလပ်တော်ကို သူနောက်လိုက်သာဝကများ မီးသဂြိုလ် ပူဇော်တယ်။ ကြွင်းကျန် ဓါတ်တော်ကို ရှစ်စိတ် စိတ်ခွဲယူတယ်၊ ဗုဒ်ဓ သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် ကြွတော်မူသော ရှစ်တိုင်းရှစ်ငှာနေသို့ တစိတ်ခြင်းဆီ ပို့တယ်။ ပုထိုးရှစ်ဆူလည်း အဲဒီရှစ်တိုင်းဒေသမှာ ဓါတ်တော်ဌာပနာ တည်တယ်။ အချိ့မှတ်တမ်းများအရ အသောကမင်းလက်ထက် ဘီစီ ၃ရာစုတွင် အဲဒီ ပုထိုးရှစ်ဆူကို ဖွင့်ပြီး ဓါတ်တော်တွေ ပိုရအောင် ထပ်စိတ်လိုက်ပြီး ဗုဒ်ဓဘာသာနိုင်ငံတော်အတွက် ပုထိုးတော် မြောက်များစွာ ဓါတ်တော်များ ဌာပနာ တည်တယ်။ ဓါတ်တော် ပူဇော်မှုဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်များ လိုက်နာစောင့်ထိန်းတဲ့ ကျင့်ဝတ်ဖြစ်လာတယ်။ ထင်ရှားတဲ့သာဓကအနေနဲ့ သီရိလင်္ကာက စွယ်တော်စေတီ နဲ့ စင်္ကာပူက ဗုဒ်ဓ အံတော်စေတီ ပြတိုက်တို့ တွေ့ရသည်။
Cristian Violatti September 19, 2016
The dispute is still ongoing, and the exact location of the Buddha’s hometown remains speculative. Further compounding the issue are reports from the ancient Chinese pilgrims Faxian and Xuanzang, who traveled around the area in the fourth and seventh centuries AD, respectively. Both disagree on how far west of Lumbini (the birthplace of the Buddha) Kapilavastu was located
အာဂုံဆောင်မှ.. အာဂလူဆိုတဲ့.. ဗုဒ္ဓခေတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို.. ဘေးကရပ်ကြည့်နေသလို.. ပြောဟောနေသူ..ပုဂ္ဂိုလ်များ.. အခုစာရေးသူကို.. ဖနောက်နဲ့ပေါက်ဖို့သင့်တယ်..။ အဲ..
ဒီလောက်.. ပြောနေတာတောင်.. အတည်မယူ.. ဂွီ..။
ရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ ဝေဝေဝါးဝါးပါပဲ အူးမာမွပ်ရယ်။ မှားနိုင်တာကိုပဲ သူတို့သိတာ၊ အမှန်ကို မသိသေးပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့် ရေကို ရွှေခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ငွေခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ရိုးရိုးခွက်ဖြင့်ဖြစ်စေ မည်သို့ ခပ်သောက်သောက် ရေငတ်ပြေခြင်းကို ရွှေခွက်တော့ မရှိ၊ ငွေခွက်တော့မရှိ သံသယပွား ပြစ်မှားမိခြင်း သတိပြုရန်လိုသည်။
ထည့်ထားတာ.. ရေမှမဟုတ်တာကိုရင်ရယ်..။ ကိုရင်တို့.. ပညတ်နဲ့.. ပရမတ်လုံးလည်လိုက်နေသူတွေအတွေးအရကောက်ရင်.. H20 လည်းမဟုတ်.. H လည်းမဟုတ်.. ။ H ကိုရေးတဲ့.. ဘော်ပင်ရဲ့မှင်လည်းမဟုတ်..။ အဲဒီမှင်ရဲ့ အရောင်လည်းမဟုတ်..။ မှင်အရောင်ရဲ့ အမည်လည်းမဟုတ်.. ။ အမည်ဆိုတာကလည်း.. အမည်မဟုတ်..။ အနဲ့မည်ပေါင်းတာလည်းမဟုတ်..။
ဖိုက်ဖစ်ဖတိ ဇာတ်တော်တေကို တခုဘ၀င်မကျပုဗျာ…
အိန်ဒိယတိုက်ငယ်ထဲက မထွက်သလိုပဲ … ဘုရားလောင်း ရှေးဘွတေပြောပါတယ်…
ဘယ့်နျှယ့် ဘုရားအလောင်း ဒိုင်နိုဆော တို့
ဘုရားအလောင်း ပိုလာ ဘဲယား တို့
ဘုရားအလောင်း သားပိုက်ကောင် တို့..
ဘုရားအလောင်း ၀ှိုက်ရှာ့ခ် တို့ မရှိဖူးတာ …
ဂေါတမဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ရာ.. ထောင်ချီလောက်မှ.. ပုံပြောကောင်းတဲ့ ဦးဦးတို့တွေပြောထားခဲ့တာလို့တော့.. သိပါတယ်နော..။
ဘုရားလောင်း.. တီရက်စ် ဇတ်လမ်းလေး..။
ဇတ်ကိုပေါင်းသော်……ဘာဘာ ဘာမှမယုံချင်တော့ :))
တခုစဉ်းစားမိတာ စာရေးသူ ပြောသွားတဲ့ အချက်၆ – ဗုဓ်ဓ ဘာသာသည် မူလက သာမန်မျှသာ၊ နောင်နှစ်၃၀၀အကြာ အာသောကမင်းတက်မှ ကြီးပွားတယ်။ ကြော်တို့ ငယ်စဉ်က သိမှတ်လာတဲ့သာသနာ့သမိုင်းမှာ အဲဒီမတိုင်ခင် အဇာတသတ်မင်းကြီး ရှိတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သာသနာပြုခဲ့တယ်။ မှတ်မိသလောက်ဆို သူ့အလွန် သူ့လောက် ဘုန်းမရှိသူမင်းလက်ထက်မှာ သာသနာဆက်ပြုနိုင်ဖို့ ရံပုံငွေ ရွှေအိုးကြီးတွေမြှုပ်တယ်။ အသောကမင်းလက်ထက် တူးဖေါ်တွေ့တော့ သူလိုမင်းအတွက် မဟုတ်ဆိုပြီး မယူဘူး၊ ပြန်ထားခဲ့တယ်။ ဓါတ်တော်မွေတောာ်တွေပဲ ယူတယ်။ ယုန်ယုန် ပဒတ် ပဒတ် ပြောချင်တာ အဇာတသတ်မင်း အကြောင်း အခုပို့စ်ထဲမပါ။ သမိုင်းမှာတော့ အဇာတသတ်သည် ဘုရားရှင်ဒကာရင်း ခမည်းတော် ဗိန်မသာရမင်းကြီးကို သတ်ခဲ့သူ၊ ဒေဝဒတ်နဲ့ ပေါင်းရိုက်ခဲ့သူ။ ကိုယ်မှားသလား သူမှားသလား… ဒန် တန့် တန်…။ အူးမာမွပ် ခင်ဗျား တေတင့်တယ်။။။။။
အဇာတသတ်မင်းက..ရံပုံငွေ.. ရွှေအိုးကြီးတွေမြုတ်နိုင်အောင်ဆိုတာ.. အဲဒီနယ်.. အဲဒီခေတ်.. ရွှေတွေဘယ်ကရမှာလည်း..။ ရွှေထွက်တဲ့ဒေသလည်းမဟုတ်..။
ကုန်သွယ်ထွန်းကာရာဒေသလည်းမဟုတ်..။အဇာတသတ်ပိုင်.. နိုင်ငံပိစိလက်တောက်လောက်ကလေးကနေ.. ရှိသမျှလူထုအခွန်တွေကစုဆောင်းထားရင်တောင်… ရှိလှ.. ရွှေပိဿာ ၁၀၀ ပေါ့..။
ကျန်တာတွေ.. မိုးပေါ်ကကျလာတယ်ပေါ့.. ဟုတ်စ..။
အင်ပါယာကြီးထောင်နိုင်တဲ့.. အသောကမင်းနဲ့တော့ မနှိုင်းယှဉ်နိုင်…။
ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က.. worth $22 billion ဆိုတာက… အဲဒီခေတ်က ပစ္စည်းတန်ဖိုးဆိုတာထက်… အခုခေတ်မှာရှေးဟောင်းပစ္စည်းမို့.. တန်ဖိုးတက်ပြနေတာကို ဆိုလိုရင်း…။ ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ထိုးတဲ့ ဆွယ်တာတောင်.. ဒေါ်လာ ၅သိန်းခေါ်ထားသေးတာပဲ.. )